တနင်္ဂနွေ နေ့ ည အတွက် နောက်ဆုံး ရ သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
တနင်္ဂနွေ နေ့ ည အတွက် နောက်ဆုံး ရ သတင်းများ
By Edi Tor September 9, 2018
OFFICIAL !!! လက် စတာ စီး တီး အသင်း ရဲ့ ခံစစ် မှုး ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား က တော့ အသင်း နဲ့ ၅ နှစ် သက်တမ်း တိုး စာချုပ် ကို ချုပ် ဆို သွားခဲ့ ပြီ ဖြစ် တယ် လို့ အတည် ပြု ကြေ ငြာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် အသင်း ခေါင်း ဆောင် ရာ မိုစ့် က တော့ ယမန် နေ့ ညက ပွဲ မှာ ဦး ခေါင်း ဒဏ် ရာ ရ ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂလန် နောက် ခံလူ လုခ် ရှော ကို အမြန် ဆုံး သက် သာ လာ စေ ဖို့ ဆု မွန် ကောင်း တောင်း ပေး လိုက် တယ် လို့ ကြား သိ ရ ပါတယ် ။
ဒါ့ အပြင် ရာမိုစ့် ဟာ လာမယ့် ကမ္ဘာ့ အ ကောင်း ဆုံး ဆု ပေး ပွဲ တွေ အတွက် အသင်း ဖော် လူ ကာ မို ဒ ရစ် ကို ထောက် ခံ သွား ခဲ့ တယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ် ။
ယူ နိုက် တက် ကွင်း လယ် လူ ပေါ့ဘာ က တော့ ဘာ စီ လို နာ ကို ပြောင်း ရွှေ့ မယ် ဆို တဲ့ သတင်း တွေ ကို နောက် တစ်ကြိမ် ငြင်း ဆန် သွား ခဲ့ ပြန် တယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဟောင်း ဒေးဗစ် မိုရက်စ် ဟာ အမေရိကန် လက် ရွေး စင် နည်းပြ သစ် ဖြစ် လာ နိုင် ခြေ ရှိ တယ် လို့ သတင်း ပေါ် ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် အသင်း ဟာ သူတို့ ရဲ့ ကြယ်ပွင့် ကစား သမား ဒီ ဂျောင် အတွက် စပါး အသင်း ရဲ့ ပေါင် ၄၅ သန်း နဲ့ ကမ်းလှမ်း မှု ကို ငြင်းပယ် ခဲံ တယ် လို့ သတင်း ထွက် ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျုဗင်တပ် နောက် ခံ လူ ဘီနာတီယာ က တော့ မော်ရိုကို လက် ရွေး စင် အသင်း က နေ အနား ယူ သွား ဖို့ စဥင်္်းစား နေတယ် လို့ သိ ရ ပါတယ် ။
ဝေးလ် အသင်း တောင် ပံ ကစား သမား ဂါရတ် ဘေးလ် ဟာ လာမယ့် ဒိန်းမတ် အသင်း နဲ့ ပွဲစဉ် မှာ အသင်း ခေါင်ဆောင် လက်ပတ် ကို ပထ မဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ၀တ် ဆင် ကစား ခွင့် ရရှိ မယ် လို့ ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
အမျိုး သမီး စူပါ လိဂ် အဖွင့် ပွဲစဉ် အဖြစ် အာဆင်နယ် နဲ့ လီဗာပူး အမျိုး သမီး အသင်း တို့ ယှဉ် ပြိုင် ကစား ခဲ့ ရာမှာ အာဆင်နယ် အမျိုး သမီး အသင်း က ၅ – ၀ ရလဒ် နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲ မှာ အာဆင်နယ် ဘက် က တိုက် စစ် မှုး မီဒမ်မာ ခြေစွမ်း ပြ ခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ် သွင်း ယူ ကာ ကျန် ၂ ဂိုး ကို လည်း ဖန်တီး ပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန် ချက် စတာ ယူ နိုက် တက် နည်း ပြ ကြီး ဟို ဆေး မော် ရင် ဟို ဟာ ယမန် နေ့ က အင်္ဂလန် – စပိန် ပွဲ စဉ် ကို ၀င် ဘာ လေ ကွင်း မှာ သွား ရောက် ကြည့် ရှု ပြီး ပြန် အထွက် မှာ ကြိုးတန်း တစ် ခု ကို ၀င် တိုက် မိ ပြီး ချော် လဲ သွား ခဲ့ တယ် လို့ ကြား သိရ ပါတယ် ။ မော် ရင် ဟို ဟာ အမြန် ပြန် ထ နိုင် ခဲ့ ပေမယ့် လက် မြန် လှ တဲ့ သတင်း ထောက် တွေ က တော့ အဆိုပါ အဖြစ် အပျက် ကို အမိ အရ ဓါတ် ပုံ ရိုက် ကူး နိုင် ခဲ့ ပါ တယ် ။
OFFICIAL !!! လကျ စတာ စီး တီး အသငျး ရဲ့ ခံစဈ မှုး ဟယျရီ မကျဂှဲယား က တော့ အသငျး နဲ့ ၅ နှဈ သကျတမျး တိုး စာခြုပျ ကို ခြုပျ ဆို သှားခဲ့ ပွီ ဖွဈ တယျ လို့ အတညျ ပွု ကွေ ငွာ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
စပိနျ အသငျး ခေါငျး ဆောငျ ရာ မိုဈ့ က တော့ ယမနျ နေ့ ညက ပှဲ မှာ ဦး ခေါငျး ဒဏျ ရာ ရ ခဲ့ တဲ့ အင်ျဂလနျ နောကျ ခံလူ လုချ ရှော ကို အမွနျ ဆုံး သကျ သာ လာ စေ ဖို့ ဆု မှနျ ကောငျး တောငျး ပေး လိုကျ တယျ လို့ ကွား သိ ရ ပါတယျ ။
ဒါ့ အပွငျ ရာမိုဈ့ ဟာ လာမယျ့ ကမ်ဘာ့ အ ကောငျး ဆုံး ဆု ပေး ပှဲ တှေ အတှကျ အသငျး ဖျော လူ ကာ မို ဒ ရဈ ကို ထောကျ ခံ သှား ခဲ့ တယျ လို့ လညျး သိရ ပါတယျ ။
ယူ နိုကျ တကျ ကှငျး လယျ လူ ပေါ့ဘာ က တော့ ဘာ စီ လို နာ ကို ပွောငျး ရှေ့ မယျ ဆို တဲ့ သတငျး တှေ ကို နောကျ တဈကွိမျ ငွငျး ဆနျ သှား ခဲ့ ပွနျ တယျ လို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။
အဲဗာတနျ နဲ့ မနျယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဟောငျး ဒေးဗဈ မိုရကျဈ ဟာ အမရေိကနျ လကျ ရှေး စငျ နညျးပွ သဈ ဖွဈ လာ နိုငျ ခွေ ရှိ တယျ လို့ သတငျး ပျေါ ထှကျ လာခဲ့ ပါတယျ ။
အိုငျယကျဈ အသငျး ဟာ သူတို့ ရဲ့ ကွယျပှငျ့ ကစား သမား ဒီ ဂြောငျ အတှကျ စပါး အသငျး ရဲ့ ပေါငျ ၄၅ သနျး နဲ့ ကမျးလှမျး မှု ကို ငွငျးပယျ ခဲံ တယျ လို့ သတငျး ထှကျ ပျေါ လာခဲ့ ပါတယျ ။
ဂြုဗငျတပျ နောကျ ခံ လူ ဘီနာတီယာ က တော့ မျောရိုကို လကျ ရှေး စငျ အသငျး က နေ အနား ယူ သှား ဖို့ စဥင်ျးစား နတေယျ လို့ သိ ရ ပါတယျ ။
ဝေးလျ အသငျး တောငျ ပံ ကစား သမား ဂါရတျ ဘေးလျ ဟာ လာမယျ့ ဒိနျးမတျ အသငျး နဲ့ ပှဲစဉျ မှာ အသငျး ခေါငျဆောငျ လကျပတျ ကို ပထ မဆုံး အကွိမျ အဖွဈ ၀တျ ဆငျ ကစား ခှငျ့ ရရှိ မယျ လို့ ကွားသိ ရ ပါတယျ ။
အမြိုး သမီး စူပါ လိဂျ အဖှငျ့ ပှဲစဉျ အဖွဈ အာဆငျနယျ နဲ့ လီဗာပူး အမြိုး သမီး အသငျး တို့ ယှဉျ ပွိုငျ ကစား ခဲ့ ရာမှာ အာဆငျနယျ အမြိုး သမီး အသငျး က ၅ – ၀ ရလဒျ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ပှဲ မှာ အာဆငျနယျ ဘကျ က တိုကျ စဈ မှုး မီဒမျမာ ခွစှေမျး ပွ ခဲ့ပွီး ဟကျထရဈ သှငျး ယူ ကာ ကနျြ ၂ ဂိုး ကို လညျး ဖနျတီး ပေး သှားခဲ့ ပါတယျ ။
မနျ ခကျြ စတာ ယူ နိုကျ တကျ နညျး ပွ ကွီး ဟို ဆေး မျော ရငျ ဟို ဟာ ယမနျ နေ့ က အင်ျဂလနျ – စပိနျ ပှဲ စဉျ ကို ၀ငျ ဘာ လေ ကှငျး မှာ သှား ရောကျ ကွညျ့ ရှု ပွီး ပွနျ အထှကျ မှာ ကွိုးတနျး တဈ ခု ကို ၀ငျ တိုကျ မိ ပွီး ခြျော လဲ သှား ခဲ့ တယျ လို့ ကွား သိရ ပါတယျ ။ မျော ရငျ ဟို ဟာ အမွနျ ပွနျ ထ နိုငျ ခဲ့ ပမေယျ့ လကျ မွနျ လှ တဲ့ သတငျး ထောကျ တှေ က တော့ အဆိုပါ အဖွဈ အပကျြ ကို အမိ အရ ဓါတျ ပုံ ရိုကျ ကူး နိုငျ ခဲ့ ပါ တယျ ။